Iphupha malunga neenwele zekhwapha Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Iphupha Ngeenwele zekhwapha
Iinwele ezingaphantsi kwekhwapha zihlala kunjalo okanye zisisihloko esiphikisayo namhlanje. Abasetyhini abaninzi bayacheba iinwele zabo ezingaphantsi, ngakumbi phakathi kwabafazi, kodwa le meko iya isanda phakathi kwamadoda ngokunjalo. Iinwele ezingaphantsi kwekhwapha ziqwalaselwa ngabaninzi ukuba zingangcolisi okanye zingenakucinga nokukhula kweenwele apho. Kwabanye, kuyindalo ukugcina iinwele phantsi kwekhwapha kwaye ungachebi. Abanye abantu, kwelinye icala, bajonga iinwele ezingaphantsi kwekhwaphu njengengxelo yezopolitiko.
Ukuba iinwele zekhwapha zidlala indima ekulaleni, kufanelekile ukutolikwa kwephupha ngendlela iphupha ngokwalo elihambelana ngayo neli candelo lomzimba wakho. Ngaba ubona kuyinto engathandekiyo? Okanye awuniki ukubaluleka kwesi sihloko?
1 Uphawu lwephupha «ikhwapha iinwele» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ikhwapha iinwele» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iinwele zekhwapha» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ikhwapha iinwele» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba iinwele zekhwapha zidlala indima ekhethekileyo ephupheni okanye zikhule zomelele ngokukodwa, oku kunokuthetha ukuba iphupha elo ukhuseleko uya kuyifumana okanye uyifune.
Ngokwesiko, iinwele ezingaphantsi kwekhwapha ziyasetyenziswa njengophawu lwe phu melela Kwaye itolikwa impumelelo yezemali, imali inokuza ikakhulu kumalungu osapho. Ukuba zikhula ngamandla, zibonisa umsebenzi. Olu toliko lusebenza ngakumbi xa iinwele zekhwapha eziphuphayo zingabonwa njengezimbi.
Ukutolikwa okungalunganga komfanekiso wephupha kuthi iinwele zekhwapha ziyayeka Iintshaba Uyakwazi ukunyamezela, iinwele ziyatyeba kwaye ziyatyeba, kokukhona amaphupha kuya kufuneka alwe nawo. Ukuba, ngokuchaseneyo, uboya bekhwapha buya kuwa okanye bucekeceke, uphawu lwephupha lumele ukubuyela umva. Oku ukuhluleka inokwenzeka kwindawo yokulala okanye kubomi babucala.
Ukuba abanye abantu badlala indima ephupheni, uphawu lwephupha lubhekisa kubudlelwane phakathi kwabantu. Kuba ikhwapha lilungu elisenyongweni lomzimba, thetha u ulwalamano olusenyongweni, ukuba iphupha libonisa umntu iinwele zakhe zekhwapha ephupheni kwaye ngokuchaseneyo. Ukutolikwa kwamaphupha, oku kuthetha ukuzithemba kunye nemvakalelo yokungazifihli komnye. Ke ngoko, unokufunda okuninzi kula maphupha malunga nobudlelwane bokuphupha nabantu abakungqongileyo.
Uphawu lwephupha «ikhwapha iinwele» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, uphawu lwephupha luhlala lukhomba kwi iinxalenye zesilisa yokuphupha. Oku kunokubonwa njengezilwanyana kunye namandla.
Ukuba umntu wasetyhini oqhele ukucheba amakhwapha amaphupha ezinde, ezikhulayo zeenwele zekhwapha, ukhathazekile kwicala lakhe lobudoda. Omabini amacala abalulekile kubuntu obulinganayo, kokubini ubufazi kunye nobudoda.
Kwelinye icala, iphupha linokutyhila okuninzi xa uphupha ngobuhlobo bakho. Ikhwapha lilungu elincinci lomzimba elamkelekileyo eluntwini. Ukuvumela umntu ukuba ayibone, ngakumbi xa inoboya, bubungqina baloo nto. ukuthembela kunye nokuziva unqabisekile. Ngalo mntu uphuphayo angabelana ngeemfihlo.
Ukuba omnye umntu ukubonisa iinwele ezingaphantsi kwekhwapha, lo mntu ukubonisa ukuzithemba okanye ukuziva ekhululekile kwaye engathintelwanga xa ulele.
Uphawu lwephupha «iinwele zekhwapha» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, iinwele ezingaphantsi kwekhwapha zimela ukulala. obusondeleyo Amacandelo obomi kwaye kutheni umgaqo oyindoda.
Iphupha malunga ne-Eieruhr